Momba anay - Suzhou Kudi Trade Co., ltd.
Suzhou Kudi Trade Co., ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana fikolokoloana biby fiompy lehibe indrindra ary famonosana alika azo averina any Shina ary efa 19 taona mahery izahay no niasa manokana tamin'ity sehatra ity. Ny orinasanay dia tany Suzhou, izay antsasak'adiny ihany amin'ny lamasinina avy any amin'ny seranam-piaramanidina Shanghai Hongqiao. Manana ozinina roa izahay izay natao indrindra ho an'ny fitaovan'ny fikolokoloana biby sy ny fatorana alika azo ahemotra, ny vozon'akanjo ary ny kilalao biby fiompy miaraka amin'ny velaran'ny famokarana 9000 metatra toradroa. Manana WALMART Walgreen, Sedex P4, BSCI, BRC ary ISO9001audit sns izahay. Manana mpiasa tanteraka izahay manodidina ny 230 ka hatramin'izao.
Manana manodidina ny 800 sku sy entana patanty 130 izahay izao. Satria isika fanavaozana izao no lakilen'ny vokatra, ka isan-taona dia hanondrotra manodidina ny 20% ny tombom-bolantsika amin'ireo entana vaovao R&D izahay ary hamorona vokatra tsara kokoa ho an'ny biby fiompy. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 25 ny olona ao amin'ny R&D tem ary afaka mamolavola entana vaovao 20-30 isan-taona. Samy OEM sy ODM dia azo ekena ao amin'ny orinasa misy anay.
Ary ny kalitao koa no nifantohanay foana. Manolotra ny mpanjifanay antoka foana izahay mandritra ny roa taona ny vokatra mba hiantohana ny kalitaonay.
Ny mpanjifanay dia avy amin'ny firenena sy faritra 35 mahery. EU sy Amerika avaratra no tsenantsika lehibe. Nanompo mpanjifa mihoatra ny 2000 izahay, ao anatin'izany ny biby fiompy Walmart, Walgreen, Central & Garden sns. Hitsidika matetika ny mpanjifanay lehibe izahay indraindray ary hifanakalo drafitra stratejika amin'ny ho avy mba hiantohana ny fiaraha-miasa maharitra.
Ny tanjonay dia ny hanomezana fitiavana bebe kokoa ny biby fiompy, hikaroka sy hampivelatra ireo vokatra navaozina, hamorona fiainana mety sy milamina kokoa ho an'ny olona sy ny biby fiompy. Faly izahay manome ny mpanjifanay vokatra tsara sy vahaolana azo ampiharina sy ara-toekarena bebe kokoa amin'ny fiainany isan'andro.
Tongasoa ny fitsidihanao! Manantena ny hiara-miasa aminao izahay!